ဒီမိုကရေစီ sex ~ Saw Chit Diary
No comments | Tuesday, February 07, 2012
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို အများက လွတ်လပ်ခြင်းလို့ ဘဲ လက်ခံသိရှိထားကြပါတယ်။ လွတ်လပ်တယ် ဆိုတာတော့
ဟုတ်ပါပြီ။ ဘယ်လိုမျိုးလွတ်လပ်ခြင်းလည်း ? ငါဆွဲပါတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကို ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး ။
ငါ့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ နောက်က သူများအတွက်ပါသိတတ်မှုနဲ့ တာဝန်ယူတတ်မှုကို ထည့်ပေါင်းလိုက်မှ ဒီမိုကရေစီ
ရဲ့ အနက်အဓိပါယ်ကပြည့်စုံမှာပါ ။ ငါလည်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ကို ဘာအနှောင် အချုပ်မှမရှိဘဲ လုပ်ရမယ် .... ငါ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ဘယ်သူမှလည်းထိခိုက်နှစ်နာမှုမဖြစ်စေရဘူး ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒီခေတ် လူငယ်တွေများ ခုတွေ့ ခုကြိုက်နဲ့ ခုဘဲ ဟော်တယ်ရောက်ကြတဲ့အထိ တစ်ယောက်နဲ့ တယောက် ဆက်ဆံ
လိုစိတ်တွေ ပြင်းထန်ကြတယ်။ နှစ်ဦး နှစ်ဘက်စလုံးစိတ်ပါကြလို့ ဆက်ဆံကြတယ်ဆိုပေမဲ့မိမိတို့ နှစ်ဦးစလုံး လိုချင်
နေတဲ့နာရီဝက်စာကာမအရသာရယူမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်လာမဲ့ မိမိကိုယ်ကိုရောသူတပါးကို ရောထိခိုက်နိုင်မှုတွေကိုလည်း ကြိုတင် စဉ်းစားထားရမှာပါ။
ဒီကိစ္စကိုမလွှဲမသွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ယောင်္ကျားလေးတွေဟာဖိုမဆက်ဆံရေးမှာဦးဆောင်ရသူတွေမို့ သူတို့ မှာ ပိုပြီးတာဝန်ကြီးပါတယ် ! ဆက်ဆံကြတော့မယ်ဆိုရင် အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေကို ယောင်္ကျားလေးတွေက ဦးဆောင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံဘက် မိန်းကလေးကိုပါ လုပ်ခိုင်းရမှာပါ။
၁ ။ ဟော်တယ် အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ တန်းချွတ် တန်းဆက်ဆံတာမျိုးကို လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ ယောင်္ကျားလေး
တွေ မဆက်ဆံခင်မှာ မိမိလိင်တန် ထိပ်ဖူး အသားကို ဆွဲလန်ပြီး ဆပ်ပြာဖြင့် သေချာစွာ ဆေးကြောသန့် စင်ရပါ
မယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်သူကလည်း မိန်းမအင်္ဂါကို အတွင်းထိ လက်နှိုက်ပြီး ရေဖြင့်သေချာစွာ ဆေးရပါ့မယ် ။
မြန်မာ မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ အ မြဲ အပေါ်ရံလေးဘဲဆေးကြတယ်၊ အတွင်းလက်နှိုက်ဆေးဖို့ တော်
တော်ဝန်လေးကြတယ်။ အဲဒီလို မိန်းကလေးနဲ့ တွေ့ ရင် ယောင်္ကျားလေးဖြစ်သူက သေချာ ချော့မော့ ပြောပြ ပြီး
ကိုယ်တိုင်နှိုက် ပြီးဆေးပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုလည်း ဆေးပေးသင့်ပါတယ် ။ ကိုယ်ကဘဲဆေးဆေး သူ့ ဘာသာသူဘဲ
ဆေးဆေး နှိုက်မဆေးခင် လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာ ဆေးဖို့ လည်းမမေ့ကြနဲ့ နော် ! ဟော်တယ်မှာ ဆပ်ပြာ
တတုံးထဲရှိရင် ထက်ဝက်ချိုးပြီး သတ်သတ်စီသုံးပါ ။
၂ ။ ဈေးပေါတဲ့ ဟော်တယ်မှာ လှုပ်ရှားကြတယ်ဆိုရင် အဲဒီဟော်တယ်က မျက်နှာသုတ်ပ၀ါတွေသုံးခြင်းကို လုံးဝ
ရှောင်သင့်ပါတယ် ။ တတ်နိုင်ရင် Tissue ဘဲ သုံးကြဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။
၃ ။ မိမိရဲ့ ပါးစပ်မှာ သွားဖုံးသွေးထွက်နေတာ ၊ အနာဖြစ်နေတာ ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတာတို့ ရှိလို့ ဖြစ်ဖြစ် ၊
မိန်းကလေးရဲ့ အင်္ဂါမှာ ပွန်းပဲ့ သွေထွက်နေတာတို့ ရှိလို့ ဖြစ်ဖြစ် မိမိမှ မိန်းကလေးအား ပါးစပ်ဖြင့် ဆက်ဆံ
ပေးခြင်းကို လုံးဝ ရှောင်ကြည်ရမည် ဖြစ်သလို မိန်းကလေးရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ မိမိရဲ့လိင်တံမှာလည်း ထိခိုက် ပွန်း
ပဲ့ သွေးထွက်နေတာတွေ ရှိရင် မိန်းကလေးကို မိမိ လိင်တံအား ပါးစပ်ဖြင့် လုံးဝမဆက်ဆံခိုင်းသင့်ပါ ။
၄ ။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ မိမိလိင် အင်္ဂါအား မိန်းကလေးလိင် အင်္ဂါထဲ မထည့်ခင် ( condom ) ဦးထုပ်ဆောင်း
ဖို့လုံးဝ လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့ ။ မိန်းကလေးကိုကြည့် ပြီး သူတော့ သန်းပါတယ် အစွပ်မလိုပါဘူးလို့ တွေးမယ်ဆိုရင်
ကို့ ရဲ့ ပေါ့ရော့မှုကြောင့် နာရီဝက် တစ်နှာရီစာ ဇိမ်လေးအတွက် နှစ်ဦးစလုံး တစ်သက်လုံး တစ်သက်လုံး
ယူကြုံးမရစရာ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေ အများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဒီလိုဘဲ ယောင်္ကျာလေးက
condom မစွပ်ဘဲ လုပ်တော့မယ် ဆိုတာနဲ့ဒီဘဲတော့သန့် ပါတယ် ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး ဆိုပြီး လုံးဝ မ
ပေါ့ရော့ပါနဲ့ ။ မစွပ်ရင် လုံးဝပေးမလုပ်ပါနဲ့ ။ အစမှာတော့စွပ်ထားပြီး ဆက်ဆံရင်း လမ်းတ၀က်လောက်မှာ feel
တအားတက်လာလို့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ feel လုံးဝမလာလို့ ဖြစ်ဖြစ် အစွပ်ချွတ်လိုက်ပြီး ဆက်လုပ်တာကို ယောင်္ကျားလေး
တွေဘက်က လုံဝ မလုပ်သင့်သလို မိန်းကလေးတွေလည်း feel တအားတက်နေလို့ သတိလက်လွှတ်ဖြစ်သွာံး
ပြီး ငြိမ်ခံမနေသင့်ပါဘူး ။ သတိလက်လွှတ်မဖြစ်အောင် အထူးသတိရှိနေရပါမယ် ။
မိမိတို့ နှစ်ဦးအနက် နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ၊
မလိုလားအပ်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်လာကြရင် ကာယကံရှင်တွေတင်မကဘဲ မိဘဆွေမျိုးတွေပါ ပတ်ဝန်းကျင်
မှာ မျက်နှာမပြရဲရလောက်အောင် အရှက်တကွဲ ဖြစ်ရမဲ့ အပြင် ငွေကြေးအများကြီးကုန်ကျခံ ကုရအုံးမယ် ။
ကုလို့ မရရင် သေမင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရအုံးမှာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ မိန်ူကလေးက ကိုယ်ဝန်ရသွားပြီး ယောင်္ကျားလေး
ဖြစ်သူက ခေါင်းရှောင်ပြီး ဘာတာဝန်မှမယူနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ရော ! မိန်းကလေးကတတ်နိုင်လို့ကိုယ်ဝန်
ချလိုက်တယ်ဆိုဘာတော့ ၊ သင်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ရော့စွာ တခဏတာ ပျော်ပါးလိုက်မှုကြောင့် အသက်
တချောင်းကို လူ့ လောကထဲ မရောက်ခင်ကို သတ်လိုက်ရတဲ့ အကုသိုလ်ကံ ကို သင်တို့ မကြောက်ကြဘူး
လား ။ မိန်းကလေးလုပ်သူက မတတ်နိုင်လို့ ဖြစ်ဖြစ် မသတ်ရက်လို့ ဖြစ်ဖြစ် အဖေ မဖေါ်ပြနိုင်တဲ့ ကလေးကို
မွေးထုတ်လိုက်ရင်ရော .... မိန်းကလေးဖြစ်သူက ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှက်ရမဲ့အပြင် မွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့ ဘ၀
ကရော ဘယ်လို သာယာဖြောင့်ဖြူးနိုင်တော့မလဲ ? ဘာမှဖြစ်မြောက်အောင် တာဝန်ယူ မပျိုးထောင်ပေးနိုင်
ဘဲ အသက်တချောင်းကို လူ့ လောကထဲခေါ်လာပြီး ပစ်ထားတာဟာလည်း တော်တော်ကြီးမားတဲ့ အကုသိုလ်
ငရဲ ပါဘဲ ။ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် အပျို ၊ လူပျိုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ မမှားသင့်တာတွေ မမှားရ
အောင် ဒါတွေအားလုံးကို ကြိုသိထားပြီး ခေါင်းထဲထည့်ထားသင့်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီဟာကို ဖြတ်ပြီးရင်
ကိုယ့်လို အများသိစေဖို့ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါ။
၅ ။ ဆက်ဆံလို့ ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်း ယောင်္ကျားလေးတွေ ငါတော့ခဏ စိမ်ထားပြီး ဇိမ်ခံလိုက်အုံးမယ် ဆိုတာ
မျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနှင့် ။ ဒီလိုစိမ်ထားပြီး လိင်တံပျော့သွားမှ ဆွဲထုတ်ရင် ( condom ) အစွပ် မိန်းမအင်္ဂါ ထဲ
ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ် ။ အဲလိုကျန်ခဲ့တဲ့ အစွပ်ကို လက်နဲ့ ဆွဲထုတ်လို့မတော်တဆ အစွတ်ထဲက ယောင်္ကျား
သုတ်ရည် မိန်းမအင်္ဂါထဲ ရောက်သွားပြီး ရောဂါ ( သို့ ) ကိုယ်ဝန်ရသွားစေနိုင်ပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ယောင်္ကျား
လေးတွေ ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ အစွပ်အထဲမှာ မကျန်ခဲ့အောင် သတိထားပြီး သေသေချာချာ
ဆွဲထုတ်ပါ။ ပြီးရင် အစွပ်ကို Tissue နဲ့ ကိုင်ပြီး လိင်တံပေါ်ကအသာလေးဆွဲချွတ်ပြီး Tissue နဲ့အစွပ်ကို
အမှိုက်ပုံထဲ ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကို့ ရဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ လက်ကို သေသေချာချာဆေး ပြီးမှ လိင်တံကို ကိုင်ပြီး ထိပ်ဖူး
ဆွဲလှန်ပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာဆေးပါ ။ မိန်းကလေးတွေလည်း ကို့ ဆပ်ပြာနဲ့ လက်ကိုအရင်ဆေး ပြီးရင် အထဲနှိုက်
ပြီး ရေနဲ့ သေသေချာချာဆေးပါ ။ ပိုကောင်းတာကတော့ မိန်းကလေးတွေ SKY LARK နတ်စည်းစိမ်ခံ ဂျယ်လ်
ဆောင်ထားပြီး အတွင်းပါ အညွှန်းအတိုင်း အသုံးပြုရင် သင့် အင်္ဂါ အမြဲ သန့် ရှင်းမွှေးကြိုင်နေပြီး တော်ရုံတန်ရုံ
နဲ့ ရောဂါ မကူးနိုင်တဲ့ အပြင် ခုလို ဆက်ဆံတဲ့ အခါ သင်ရော သင့် Boyfriend ကိုပါ အများကြီး Feel ပိုရှိစေမှာ
ဖြစ်ပါတယ် ။ ခုလို Boyfriend နဲ့ ဆက်ဆံလို့ ချောင်သွားတာမျိုးကိုလည်း 90 % ကာကွယ်ပေးတဲ့ အတွက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်း အမြဲ အပျိုစင်လေးတစ်ယောက်လို တင်းကြပ်စည်းပိုင်နေသူလေးအဖြစ် ယုံကြည်မှု
အပြည့် အ၀ ရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲ နှစ်ယောက်စလုံး အပေါ်မှာ ပြောသလို အားလုံး လိုက်နာပြီး ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ကိုလိုချင်တဲ့Feel လည်း
ကောင်းကောင်းရမယ် ။ ပြီးတော့ ကို့ ကြောင့် ဘယ်သူမှ ဒုက္ခလည်း မရောက်တော့ ဘူးပေါ့!
ဒါကို " ဒီမိုကရေစီ sex " လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီ ဆောင်းပါး ဖတ်ရတဲ့သူတွေ အာလုံး ဒီနေ့ ကစပြီး SEX လို့ ဆို
" ဒီမိုကရေစီ sex " ကို ခေါင်းထဲမှာ အမြဲ သတိရလိုက်ပါ